प्याज तथा लसुनको आयात | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण प्याज तथा लसुनको आयात
on: April 11, 2019 लेख | दृष्टिकोण
काठमाडौंमा रहरलाग्दो किसिमले तरकारीको कौसी खेती गर्ने चलन बढेको छ । व्यावसायिक कृषिमा विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुने तथा स्वास्थ्यमा समस्या आएका समाचारले सबैलाई सचेत बनाएको छ । तर, विकल्प नभएपछि के गर्ने ? सबैका लागि सम्भव नहोला तर खास गरी आफ्नै घर हुनेहरूका लागि परिवारले उपभोग गर्न कौसीखेतीले यहाँ विस्तारै प्रश्रय पाउँदै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तै कौसीखेती गर्ने एक मेहनती कृषक जसले आफ्नो परिवारलाई अग्र्यानिक तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाएका छन् । उनले कुनै अन्तरवार्तामा प्याज र लसुनको बाहिरी देशबाट आयात भएको सुन्दा निकै दुःख लाग्छ भनेपछि यसको आयात आकार कस्तो रहेछ तथ्यांक हेर्ने उत्सुकता जाग्यो । यसै क्रममा देशका भन्सार नाकाहरूबाट विगत ४ वर्षमा केकति प्याज र लसुनको आयात भएको रहेछ तथ्याङ्कका आधारमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्याज तथा लसुनको आयात मुख्य रूपमा दुई प्रकारको हुन्छ : एउटा ताजा वा चिसो पारेको जुन हरियो तरकारी वा छ्यापीका रूपमा समेत उपभोग हुन्छ । अर्को सुक्खा सिंगो दाना वा टुक्रा पारेको वा पिंधेको रूपमा आयात हुने गर्छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा रू. ३ अर्ब ५२ करोड मूल्यको प्याज तथा लसुन (ताजा वा सुक्खा सबै गरेर) आयात भएको थियो, जसमा ताजा वा चिसो पारेको रू. ३ अर्ब ३५ करोड तथा सुक्खा सिंगो दाना वा टुक्रा पारेको वा पिंधेको रूपमा करीब रू. १७ करोडको आयात भयो । आव २०७२/७३ मा करीब रू. ३ अर्ब ८४ करोड मूल्यको कुल आयात भएको थियो, जसमा ताजा वा चिसो पारेको रू. ३ अर्ब ५९ करोड तथा सुक्खा सिंगो दाना वा टुक्रा पारेको वा पिंधेको रूपमा करीब रू. २५ करोडको आयात भयो । आव २०७३/७४ मा आयातमा करीब २२ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल रू. ४ अर्ब ९९ करोडको आयात भयो । आ व २०७४/७५ मा करीब २१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५ अर्ब ६६ करोड मूल्यको आयात भएको थियो । यसरी पछिल्ला वर्षहरूमा आयात वृद्धिदर उच्च रहेको देखिन्छ । तर, सुक्खा प्याज तथा लसुनमा भने आव २०७४।७५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आएको देखिन्छ ।
आयात हुने रूप वा प्रकारमा ताजा वा चिसो पारेको डाँठ तथा पात सहितको प्याजको आयात सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । आव २०७४/७५ मा ताजा र सुक्खा कुल आयात मध्ये ताजा प्याजको अंश ८२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । दोस्रोमा ताजा वा चिसो पारेको डाँठ तथा पात सहितको लसुन १० दशमलव ८ प्रतिशत (पहिलोको तुलनामा निकै कम) रहेको थियो ।
देशगत रूपमा हेर्दा आव २०७४/७५ मा भारतबाट रू. ४ अर्ब ६३ करोड मूल्यको ताजा वा चिसो पारेको डाँठ तथा पात सहितको प्याज आयात भयो । ताजा वा चिसो पारेको प्याज तथा लसुनको कुल आयातमा यो ८७ दशमलव ६३ प्रतिशत अंश हो, दोस्रोमा चीनबाट ताजा वा चिसो पारेको डाँठ तथा पात सहितको लसुन रू. ६० करोड मूल्यको आयात (११ दशमलव ४४ प्रतिशत अंश) भयो ।
सुकेको प्याज लसुन आयातमध्ये सबैभन्दा बढी सुकेको प्याज आयात भारतबाट नै भएको थियो । यसको आयात करीब १८ करोड मूल्यको (४६ दशमलव ४४ प्रतिशत अंश) भएको थियो भने दोस्रोमा पनि लसुन (विविध रूपको) भारतबाट नै रू. १७ करोड मूल्यको (४४ दशमलव २२ प्रतिशत अंश) आयात भएको थियो । सुकेको प्याज तथा लसुन कुल आयातको ९० दशमलम ६६ प्रतिशत अंशा गतवर्ष भारतले लिएको थियो । विगतका अरू वर्षहरूमा पनि भारतको अंश करीब यस्तै उच्च देखिन्छ ।